စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | Join4Biz
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Join4Biz.com ။ Join4Biz အချိန်ကနေအသိပေးစရာမလိုဘဲအချိန်ကိုသင်ငါတို့အားဖြင့် updated စေခြင်းငှါအရာသုံးစွဲမှုအောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုမှဘာသာရပ်သင်ကရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသည်။ ကိုရယူသုံးခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Join4Biz ပလက်ဖောင်းအပါအဝင် Join4Biz မိုဘိုင်း application များသို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပေးအပ်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်သောနှင့် operated Join4Bizသငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူအဖြစ်အခြားမည်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များ, privacy ကိုမူဝါဒ, စည်းမျဉ်းများနှင့်အ site ကိုတစ်လျှောက်လုံးကိုးကားနောက်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။
သင်တို့အပေါ်မှာအကြောင်းအရာအတွက်ပို့စ်တင်နေဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသဘောတူ Join4Bizသင်အကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအခွင့်အရေးများကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းခိုင်လုံ။ ပိုများသောအထူးသ, သငျသညျ, သငျသညျ post သမျှသောအကြောင်းအရာများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူဖြစ်အီးမေးလ်, သူတို့ကိုထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ရမည် Join4Biz။ သင်တို့ရှိသမျှသည်၏အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်အပေါ်လှုပ်ရှားမှုများဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်, Join4Biz သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့သငျတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာ, မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်အခြား device မှသင့်အကောင့် / ပရိုဖိုင်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသေူ။ သငျသညျကိုနားလည် Join4Biz သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာ၏မြင်ကွင်းကိုထိန်းချုပ်မထားဘူး, သင်သည်လက်ျာနှင့်မဆိုအကြောင်းအရာမြင်သာဘယ်လို shared ဖြစ်ပါတယ်စီမံခန့်ခွဲရန် option ရှိသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားဘို့, သင်တို့အပေါ်မှာတခြားသူတွေနဲ့မျှဝေပေးမဆိုအကြောင်းအရာ Join4Biz သူတို့ကိုအားဖြင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောစေခြင်းငှါ Join4Biz။ သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာသက်ဆိုင်အားလုံးဥပဒေများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိနေကြသည်ကိုသင်မှတဆင့်တင်သွင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည် Join4Biz။ သင့်ရဲ့ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်အခြား site ကို, လျှောက်လွှာ, ဦးတည်ရာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးသင့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုနားလည် Join4Biz သငျသညျတတိယပါတီမှပေးမဆိုသတင်းအချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုကြသည်နှင့်ဆက်စပ်ပုံကိုကျော်မျှမထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျလညျးအသိအမှတျပွု JOIN4BIZ NO အာမခံစေသည်, သင်က SITE သို့မဟုတ်သင်သတင်းအချက်အလက်များချီးမွမ်းစေခြင်းငှါမဆိုအခြား third party websites မှတဆင့်လက်ခံရရှိ, ပတ်သက်. Demo, အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ပြောဆို OR ဆိုလို။ Join4Biz သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာမဆိုအများပြည်သူ display ကိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျနားလညျပွီးအသိအမှတျပွုသငျသညျအသုံးပြုသူတိကြောင်းကိုအကြောင်းအရာ, ထိုးစစ်, မစင်ကြယ်သော, သို့မဟုတ်ကန့်ကွက်ထိတွေ့စေခြင်းငှါ, သင်သဘောတူ Join4Biz သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၏ရလဒ်အဖြစ်ခံရဖို့စွပ်စွဲမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြမည်။ သင်သည်အခြားနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်အဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည် Join4Biz အသုံးပြုသူများသည်။ ကျနော်တို့ပိုင်ခွင့်, သင်မူကားနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများအကြားအငြင်းပွားမှုများစောင့်ကြည့်ဖို့, အဘယ်သူမျှတာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူ Join4Biz ထိနျးသိမျးသို့မဟုတ်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာနှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောထိန်းသိမ်းခြင်း, သိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောသောကောင်းသောယုံကြည်မှုအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလျှင်လည်းအကြောင်းအရာထုတ်ဖော်စခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ရက်နေ့တွင်ပို့စ်အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည့်အခါ Join4Bizသငျသညျအသုံးပြုမှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဖယ်ရှား, ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်, ဖြန့်ဝေ, တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ထုတ်ဝေ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြှနျုပျတို့ကိုမူပိုင်ခွင့်မှန့်အသတ်, အစဉ်မပြတ်, assign, ဘယ်သို့, မူပိုင်-အခမဲ့, sublicenseable ညာဘက် non-သီးသန့်ပေးရန်, လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အားလုံးစိတ်ကူးများ, အယူအဆ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သင်တို့ဆီသို့များကိုပေးစွမ်းလူသိရှင်ကြားမဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ Join4Bizဒါပေမယ့်သင်ကမဆိုထပ်မံသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, အသိပေးစာနှင့် / သို့မဟုတ်လျော်ကြေးကိုသင်သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီများမှယခုသို့မဟုတ်အနာဂတ်၌လူသိများဆိုလမ်းထဲမှာအကြောင်းအရာရှိမည်သည့်ဒေတာဘေ့စအခွင့်အရေး, ကန့်သတ်ထားဘူး။ သင့်ထံမှမဆိုကြင်နာမဆိုလျော်ကြေးငွေသို့မဟုတ်ငွေကြေးပြန်လည်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ် Join4Biz မည်သည့်အခြေအနေအရ။ ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုအကြောင်းအရာတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုမဆိုသတင်းအချက်အလက်, ဒေတာထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အကြောင်းအရာသဘောတူနှင့်သင်ဆန္ဒအလျောက်ဆုံးရှုံးမှုသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါလုပ်ပါ။
သင်, သဘောတူကိုယ်စားပြု, ရမ်းနှင့်သင်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအာမခံ Join4Biz သာအေပျရည်ရွယ်ချက်များနှင့်သင်သုံးစွဲအသုံးပြုဖို့အတွက်အားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများ, စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည် Join4Biz။ သငျသညျခကျြခငျြးသငျသညျ၏လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားတစ်ခုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုသို့မဟုတ်နှင့် ဆက်စပ်. မဆိုတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုသံသယလိမ့်မယ် Join4Biz.
အားလုံးသက်ဆိုင်သောဥပဒေများ, ပါဝင်သည်ပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, privacy ကိုဥပဒေများ, ဒေသဆိုင်ရာ, ပြည်နယ်အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဥပဒေများ, စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာနာခံ;
၏အကူအညီတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကထုံးစံ၌ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသတင်းအချက်အလက်ကျော်တိကျတဲ့အငြင်းပွားမှုများရှိသည်, အကြောင်းအရာနှင့် / သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက် Join4Biz, လိုအပ်ခဲ့လျှင်;
လူသိရှင်ကြား၎င်းတို့၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူညီချက်မပါဘဲအခြားလူတစ်ဦး၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များ post မဟုတ်ပါဘူး (ဥပမာ: အီးမေးလ်, စကားဝိုင်း, အက္ခရာ, ဖုန်းနံပါတ်များ, လိပ်စာများသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအမည်များ);
သုံးပြီးခုနှစ်တွင် Join4Bizသငျသညျလွှဲပြောင်း, တင်ခြင်း, download, အသငျသညျ post မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူ, အီးမေးလ်, ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တစ်လမ်းအတွက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ကြောင်း:
တခြားသူတွေ၏အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်အပေါ်သို့မလမ်းအတွက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်အားထိပါး: ဥပဒေမဲ့ခြိမ်းခြောက်, နောက်ယောင်ခံ privacy ကိုသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးထိုးဖောက်, degrades, အသေရေဖျက်, defames, defrauds, အောက်တန်း, ညစ်ညမ်းသော, ကြမ်းတမ်း, အဓမ္မ, မစင်ကြယ်သော, ရောင်ရမ်း, သရေဖျက်မှု, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု victimizes သို့မဟုတ် intimidates;
, ဥပဒေမဲ့ရွံမုန်းဖွယ်သို့မဟုတ်လူမျိုးရေးအရ, လူမျိုးစုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမအခြားအခွင့်အရေး, အနုပညာရှင်, privacy နဲ့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏အခွင့်အရေးကိုကန့်ကွက်သို့မဟုတ်ထိုးဖောက်လျက်ရှိ၏
အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်ကိုဖန်တီးစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ, သေခြင်း, ဆုံးရှုံးမှု, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒဏ်ရာရ, အယောင်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆီသို့မုန်းတီးမှုဖြစ်၏
မည်သည့်လမ်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အရွယ်မရောက်သေးသူအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, ကလေးညစ်ညမ်းဥပဒေများ, ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ဥပဒေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်အတွက်စေ့စပ်အရွယ်မရောက်သေးသူ၏ပုံဖော်တင်ဆက်တားမြစ်သည့်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ကြောင်းအကြောင်းအရာများကိုအပ်လုဒ်;
, မမှန်သောလှညျ့စား, လှညျ့စား, လှည့်ဖြားခြင်းသို့မဟုတ်ပါဝငျငါးစာနှင့် switch သည် ဖြစ်. ,
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်သည်အသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်. အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ဒေတာစုဆောင်း;
, အယောင်ဆောင်တုပဖို့သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်မဟုတ်မမှန်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်; သုံးတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်သင်၏ဆက်နွယ်မှုရှေ့နောက်မ Join4Biz;
ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုရယူနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုခွင့်, ခရီးစဉ်နှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကို Join4Biz ; သင့်အကောင့် / ပရိုဖိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြန်ကြားရေး အသုံးပြု.
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, ဖန်တီးသို့မဟုတ်ကွင်းဆက်အက္ခရာများ, ပိရမစ်အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်သင်ပေးပို့ခြင်းထံမှဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားကြောင်းမည်သည့်ကြော်ငြာကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ပါဝင်သောဘာမှပို့ပေး;
အပ်လုဒ်ဗိုင်းရပ်စ်များ, သို့မဟုတ်, နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားဖို့ဒီဇိုင်းကိုအခြားကုဒ်, ဖိုင်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ Join4Biz စနစ်များဒါမှမဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည် disrupts သို့မဟုတ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချို့ယွင်းနေသောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံ Join4Biz;
လက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားမှုနှင့်အတူ, တမ်သို့မဟုတ်၏ Non-အများပြည်သူဒေသများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် Join4Biz။ ဆိုက်ဤဒေသများဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီတရားစွဲဆိုခံရကောင်းခံရစေခြင်းငှါ,
အပ်လုဒ်, အီးမေးလ်များ, ရေးသားချက်များသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ပါတီများ၏အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်အားပေးလိမ့်မယ်လို့မဆိုအကြောင်းအရာထုတ်လွှင်;
အသုံးပြုခြင်း Join4Biz, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်သတိလစ်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာ, ပြည်နယ်အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဥပဒေ, စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ရန်။